Isha warka NTB
IS ayaa ku sheegatay mas'uuliyadda weerarka dhiiga badan ku daatay qoraal saxaafadda loogu talo galay oo lagu daabacay mareegta Amaq, ha yeeshee ma aysan soo bandhigin wax cadaynaya inay saxnimada arrintaas.
Kooxda IS oo inta badan sheegata mas’uuliyadda weeraro dunida ka dhaca ayey khubaradu su’aal geliyeen sheegashooda.
Ma kala cadda in IS ay horey u joogtay Sri Lanka iyo in kooxo xiriir la leh ay halkaas joogaan.
– Taageerayaasha IS way dabaaldegaan haddii IS wax ka dambayso iyo haddii kaleba. Way isdhex yaacaan marka reer galbeedka, kristaanka ama Yuhuuda la weeraro ayuu yiri Amarnath Amarasingam oo kasoo jeeda Sri Lanka kana tirsan machadka Institute for Strategic Dialogue (ISD).
Ilo ka tirsan booliiska Sri Lanka ayaa sheegay in weerarkan oo galaaftay nafta 320 qof ay door weyn ku lahaayeen labo nin oo isla dhashay. Weerarku wuxuu dhacay maalintii koowaad ee fasaxa påskedag, warkana waxaa laga soo xigtay wakaaladda wararka NTB.
Wiilashan oo uu dhalay nin ganacsade ah ayaa la sheegay inay isku qaybiyeen oo isku qarxiyeen labada hoteel ee kala ah Shangri-La iyo Cinnamon Grand hotel oo labaduba ku yaalla caasimadda dalkaas ee Colombo.
Hay’adda UNICEF ayaa sheegtay in dadka ku dhintay weerarkaasi ay ka mid ahaayeen 45 carruur ah.